Wararka - Wadamadu waxay si rasmi ah u saxiixeen warshadaha aaladda RCEP oo keenay xaalad cusub oo ganacsi
Bishii Nofeembar 15, 2020, war weyn ayaa yimid oo noqday diiradda indhaha ee waddamada adduunka oo dhan. Kadib sideed sano oo wadahadalo ah, hogaamiyaasha 15 dal, oo ay kujiraan Shiinaha, Japan iyo Singapore, waxay ku saxeexeen heshiiska RCEP shir fiidiyoow
Waxaa la bartay in RCEP guud ahaan loola jeedo Iskaashiga Wadajirka ah ee Dhameystiran ee Gobolka, waddamada xubnaha ka ahna waxaa ka mid ah Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, Singapore, Brunei, Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam, China, Japan, the Republic of Korea, Australia iyo New Zealand. Heshiiska ayaa ku saabsan ciribtirka caqabadaha ganacsiga gudaha, abuurista iyo horumarinta jawiga maalgashiga xorta ah, ballaarinta ganacsiga adeegyada, ilaalinta xuquuqda lahaanshaha aqoonta, siyaasadda tartanka iyo dhinacyo kale.
Sida ku cad heshiiska u dhexeeya 15-ka dal waxay qaadan doonaan habka labada dal ee labada dal ee loogu talagalay xoreynta ganacsiga badeecada dejinta, ka dib markii heshiisku ka dhaqan galo gobolka in ka badan 90% ganacsiga badeecadaha ayaa aakhirka gaari doona qiimo jaban, inta badanna isla markiiba hoos ayuu u dhacayaa canshuuraha eber iyo canshuuraha oo ka hooseeya eber muddo 10 sano ah, ayaa la filayaa inay ka dhigaan aagga ganacsiga xorta ah ee RCEP muddo gaaban oo dhan ballanqaadyada xorriyadda ganacsiga.
Wasaaradda Maaliyaddu waxay sheegtay in saxiixa lagu guuleystay ee RCEP uu door aad u muhiim ah ka ciyaarayo xoojinta dib u soo kabashada dhaqaalaha ka dib cudurrada iyo kor u qaadista barwaaqada muddada fog iyo horumarka waddamada oo dhan. Dardar-gelinta dheeraadka ah ee xorriyadda ganacsiga ayaa u horseedi doonta dhiirigelin weyn dhaqaalaha gobolka iyo barwaaqada ganacsiga. Faa'iidooyinka mudnaanta leh ee HESHIISKA ayaa si toos ah uga faa'iideysan doona macaamiisha iyo shirkadaha warshadaha, waxayna door muhiim ah ka ciyaari doontaa kobcinta xulashooyinka suuqa macaamiisha iyo yareynta qiimaha ganacsiga ee shirkadaha.
Saxiixa heshiis kasta wuxuu ugu dambeyn ku laaban doonaa horumarka dhaqaalaha iyo waxtarka dadka. Qalabka warshadaha Shiinaha iyo qalabka, saxiixa RCEP wuxuu si weyn kor ugu qaadayaa "bixitaanka" iyo "keenista" qalabka Shiinaha iyo aaladda, taasoo fureysa xaalad cusub oo ganacsi.
Iyada oo ah qaab iyo qalab si ballaaran loogu adeegsado warshadaha, beeraha, cilmi baarista sayniska iyo dhinacyada kale ee cabbirka, ururinta, falanqaynta iyo xakamaynta, alaabada qalabka iyo mitirka ayaa daboolaya dhammaanba dhinacyada hawlaha aadanaha. Kadib tobanaan sano oo horumar ah, Shiinaha qalabka wax soo saarka iyo qalabka ayaa sameeyay qayb wax soo saar oo dhammaystiran leh, oo leh cabbir wax soo saar gaar ah iyo awood horumarineed ee nidaamka warshadaha, koritaanka waa mid aad u dhakhso badan, badeecadaha qaarkood waxay la kulmaan baahida suuqa gudaha, laakiin sidoo kale tiro aad u tiro badan ee loo dhoofiyo suuqa dibada.
Waa run in canshuuraha Mareykanka ay cadaadis saareen macaashka wax dhoofiyayaal badan tan iyo markii dagaalkii ganacsiga ee 2018 uu billowday, laakiin sanadkii la soo dhaafay badankood waxay si firfircoon u raadsanayeen inay suuqyo kala duwan ka dhigaan si loo yareeyo saameynta canshuuraha Mareykanka.
Markan, faa iidada ugu dhakhsaha badan ee saxiixa RCEP waa dhimista canshuuraha ganacsiga ee wadamada MEMBER ee HESHIISKA, taas oo u sahlaysa shirkadaha inay maalgashi iyo dhoofinta badeecadaha iyo adeegyada dibedda. Shirkadaha ku hawlan ka ganacsiga dhoofinta qalabka iyo mitirka, waxay faa'iido u tahay kordhinta wax soo saarka dhoofinta, kordhinta dakhliga shirkadaha, hagaajinta tartanka wax soo saarka iyo ballaarinta suuqa dibedda.
Intaas waxaa sii dheer, hoos u dhigista canshuuraha, alaabada iyo alaabada mitirka ee silsiladda guud ee warshadaha iskaashiga caalamiga ah iyo iskaashiga oo la awoodi karo, isla mar ahaantaana, suuqyada caalamiga ah iyo kuwa gudaha ayaa isweydaarsi kara alaabooyinka loo baahan yahay, oo ku habboon soo dejinta shirkadaha gudaha. alaabta qalabka iyo mitirka si loo daboolo baahida.
Markan, 15 dal ayaa saxeexay RCEP. Foomka ballanqaadka canshuuraha ee waddan kasta, qalabka iyo alaabada mitirka ee ku lug leh waxaa ka mid ah mowjadaha, falanqeeyayaasha spectrum iyo qalabka kale iyo aaladaha loo isticmaalo cabbirka korantada ama kormeerka. Tijaabinta mashiinnada iyo qalabka adag, xoogga, isku-buufinta, dabacsanaanta ama astaamaha kale ee farsamada; Qalabka falanqaynta jirka iyo kiimikada iyo qalabka (tusaale ahaan, chromatograph gaas, chromatograph dareere ah, spectrometer).
Waa la sii odorosi karaa iyadoo hirgelinta xeerar isku mid ah oo asal ahaan ka soo jeeda, nidaamyada caadooyinka, kormeerka iyo karantiilidda, heerarka farsamo iyo xeerar kale, baabi'inta canshuuraha iyo caqabadaha aan canshuuraha lahayn ayaa si tartiib tartiib ah u sii deyn doona saameynta abuurista ganacsiga ee RCEP. Maaddaama ay tahay soosaaraha labaad ee ugu weyn iyo soo saaraha mitirka adduunka, tartamidda qalabka Shiinaha iyo alaabooyinka mitirka ayaa la sii horumarin doonaa, iyagoo ka faa'iideysanaya shirkado iyo macaamiil badan.
6 Wire Stepper Motor, Howlsocodsiiyaha gawaarida gawaarida, Gawaarida Stepper Hybrid, Xidhan Loop Stepper Motor Driver, 220 Volt Ac Howlsocodsiinta Motor, Ac Stepper Motor,